Sizoba njani isizini yeziphepho zango-2017? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyoba njani isizini yesiphepho sango-2017?
Iziphepho Ukukhuluma ngabo akusona isizathu senjabulo, ikakhulukazi lapho sikhumbula amagama anjengoKatrina noma uMathewu. Bobabili bafinyelele esigabeni 5 esikalini sikaSaffir-Simpson, futhi bobabili badale umonakalo omkhulu nokulahleka. Noma kunjalo minyaka yonke kufanele.
Kancane kancane ochwepheshe bayakhuthazwa ukuba benze izibikezelo zabo, yize isizini ingeke iqale kuze kube nguJuni 1. Isimo Sezulu Sezulu Sonke Isimo Sezulu Sezulu Silindele Iziphepho Eziyisithupha. Kepha hhayi lokho kuphela, kungaba yisizini eshubile kakhulu kusukela ngo-2005.
I-Global Weather Oscillations isebenzise idatha kusuka ezinkathini zeminyaka eyisi-8 eyedlule, kufaka phakathi ukubikezelwa kweziphepho ezivela e-Atlantic Basin okubandakanya uLwandle lweCaribbean neGulf of Mexico. Ngakho-ke, babona kusengaphambili ukuthi kulo nyaka kuzoba neziphepho eziyi-12 kanye neziphepho eziyisithupha, okuyizinto ezimbili noma ezintathu ezingabaluleka kuzo. Ngakho-ke, kuzoba unyaka lapho, futhi, lezi zinhlaka zizophinda zenze izindaba.
Futhi lokho, lokushisa kwamanzi olwandle kuphakeme kunokujwayelekile, ikakhulukazi esifundeni seCaribbean nase-United States. Uma sinaka ukuthi iziphepho zidinga ukuzondla ngamanzi afudumele, cishe u-22ºC, kungenzeka ukuthi sikhuluma ngesizini ezodala umonakalo omkhulu kulezi zifunda eminyakeni eyi-12 eyedlule, yize i-El Niño isala elele.
Amagama esizini ka-2017 azoba lawa alandelayo: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince, U-Withney.
Njengoba ukwazi ukubona, akekho uMathewu futhi akekho uKatrina. Lokhu kungenxa ye- amagama ahambisana neziphepho ezidala umonakalo omkhulu awasasetshenziswa.
Ngonyaka odlule bekungunyaka wokukhumbula, kube neziphepho eziyi-14 neziphepho eziyisithupha, ezintathu zazo ezacekela phansi kakhulu. Kepha kuzofanele sinake lokho okungenzeka ngo-6.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Siyoba njani isizini yesiphepho sango-2017?